တရုတ်ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော် - chainsaw စက်ယန္တရား (HC8840A) သည်မော်တော်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု & ထုတ်ကုန်များ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ & ်ဆောင်မှုများ
R & D ပစ္စည်း
သန့်ရှင်းရေးစက်သည် Motors က
အကယ်စင်စစ်စက်များအတွက် & ဥယျာဉ် Tool ကိုများအတွက် Motors က
လေခွင်းစက်သည် Motors က
Automotive Applications ကိုများအတွက် Motors က
အခြားပါဝါစက်သည် Motors က
chainsaw စက်ပစ္စည်းအတွက်မော်တာ (HC20230B)
chainsaw စက်ပစ္စည်းများအတွက်မော်တော် (HC8840A)
chainsaw စက်ယန္တရား (HC20230A / HC16230A) သည်မော်တော်
Air ကိုကွန်ပရက်ဆာသည်အမြဲတမ်းသံလိုက် Motors က (ZYT7876)
Air ကိုကွန်ပရက်ဆာသည်မော်တော် (HC9535)
မြင့်မားသောဖိအားအဝတ်လျှော်ဘို့ HC76 စီးရီး (HC7625 / 30/40)
Min.Order အရေအတွက်: 1000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ပုံစံ ဗို့ / ကြိမ်နှုန်း (V ကို / Hz) no-ဝန်ပြည်နယ်
ဗို့ (V) လက်ရှိ (က) ပါဝါကို (W) မြန်နှုန်း (rpm ပါ)
HC8840A-230 230V / 50Hz 230 ၃.၈ 850 24000
HC8840A-120 120V / 60Hz 120 ၇.၆ 880 24000
ဗို့ (V) လက်ရှိ (က) input ပါဝါ (W) မြန်နှုန်း (rpm ပါ) torque (N ကို·မီတာ) output ပါဝါ (W)
230 ၇ 1400 18000 0,41 780
120 ၁၂.၅ 1400 18000 0,41 780
ယခင်: chainsaw စက်ပစ္စည်းများအတွက်မော်တော် (HC7640F)
နောက်တစ်ခု: ခါးပတ် Sander (HC8030D) သည်မော်တော်
လျှပ်စစ် Chain မော်တော်စော
လျှပ်စစ် Chain ချွန်မော်တော်စော
လွှ 220v သည်လျှပ်စစ် Motors က
High Quality Fretsaw မော်တော်
Hot ရောင်းအားလျှပ်စစ် Sawing မော်တော်
လူကြိုက်အများဆုံးလျှပ်စစ် Sawing မော်တော်
လုပ်သောသည်မော်တော်စက် (ZYT7698 / A) ကိုမွငျလြှငျ
chainsaw စက်ပစ္စည်းများအတွက်မော်တော် (HC12-120 / HC15-230)
chainsaw စက်ပစ္စည်းများအတွက်မော်တော် (HC7640F)
chainsaw စက်ယန္တရား (HC18230N / HC15230N) သည်မော်တော်
ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော် Co. , Ltd မှ
ဖက်စ်: +86 535 861 2560
မိုဘိုင်း: +86 13564093630
E-mail ကို: bd@btmeac.com
E-mail ကို: mkt@btmeac.com
ပိုကောင်းတဲ့အခြားအဆင့်မြင့်နှစ်ပတ်လည် Outp ရောက်ရှိ ...
2016 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ client များ '' ထောက်ခံမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောန်ထမ်း '' ခက်အလုပ်လုပ်၏, ကောင်း၏မော်တော်များအတွက်အခြားစပါးရိတ်ရာကာလတစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုရတဲ့နေကြသည်။ 2016 ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည် output ကို 2.9 သန်းအစုံ, 450,000 အစုံ Inc သည် ...
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ် Unive ကနေအင်ဂျင်နီယာလီ Dongwei ...
ဇွန်လ 8 ရက်နေ့တွင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် Automation Engineer အလီ Dongwei အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကနေပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အမေရိကန်နိုင်ငံ, Ltd လီ Dongwei, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွင်းရှိလျှပ်စစ်သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းကနေပါရဂူသုတေသီရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏ Motor Co. , သွားရောက်ခဲ့ပြီး ...
သတင်းအချက်အလက် syste ၏စီမံကိန်းကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ...
ဇွန်လ 26 ရက်နေ့တွင် သာ. ကောင်း၏မော်တော်အတွက်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များအင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်း၏စီမံကိန်းအဖွဲ့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရှန်ဒေါင်း Sanjiang လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ Co. , Ltd မှဤစီမံကိန်းဒီဇိုင်းနှင့် operating တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ PLA သည် ...
နယူးမြင့်မား torque 16DCT Athlonix ™ Mini ကိုမော်တော်
Portescap Athlonix မော်တာ၎င်း၏အဆင့်မြင့် torque DCT အကွာအဝေးမှသစ်ကို 16DCT မော်တာကိုမိတ်ဆက်။ အဆိုပါ 16DCT မော်တာသာ 26mm တစ်အရှည်မှာ 5,24 mNm ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ် torque တက်ကယ်မနှုတ်နိုင်။ အဆိုပါ 16DCT အစွမ်းထက် Nd သည် ma အသုံးချ ...
နှိမ့်ချလေဟာနယ်သန့်စင်သည်ယနေ့အသုံးပြုသော handiest အိမ်ထောင်စုသန့်ရှင်းရေးကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောသေးထိရောက်သောဒီဇိုင်းကိုဖုန်မှုန့်နှင့်အခြားသေးငယ်တဲ့လက်ဖြင့်မျက်နှာပြင်များချွတ်အမှုန်များနှင့် tu ရှင်းလင်းဖို့ရှိခြင်းနှင့်အတူဝေးပြုတော်မူပြီ ...